यी राशिका ब्यक्तिहरु हुन्छन् निक्कै खर्चालु स्वभावका ! – Sandesh Press
यी राशिका ब्यक्तिहरु हुन्छन् निक्कै खर्चालु स्वभावका !
December 11, 2020 279
कोही व्यक्ति शान्त र धैर्य स्वभावका हुन्छन् भने त्यस्तै प्रकारले कोही हरेक कुरामा आफ्नो रिस देखाउनमा माहिर हुन्छन् । यस्तै प्रकारले ज्यादा व्यक्ति पैसा सम्हाल्न त कोही हाई लाइफ स्टाइल जिउन मनपराउँछन् ।यी ६ राशिका महिलाहरु निक्कै खर्चालु स्वभावकी हुन्छन् !वृष राशि:यो राशि भएका महिलाहरुलाई महंगो चिज,कपडा,जुत्ता आदिहरु किन्नमा एकदमै रुचि राख्दछन् ।
यसमा यि राशि भएका महिलाहरु हाइ लाइफ स्टाइल जिउन मन पराउँछन् ।सिंह राशि:यिनिहरुको जिन्दगीमा रुपैयाँ ,पैसा को कुनै भ्यालु हुदैन । यसमा पनि जहाँ पैसा खर्च गर्नेको कुरा आउछ त्यस्तो कुरामा यिनिहरु आफ्नो लागि नभई अरुको लागि खर्च गर्न पनि सँधै तयार रहन्छन् ।
धनु राशि:धनु राशि भएका महिलाहरु स्वतन्त्र -सोच विचारका हुनुका साथै आफ्नो मर्जि अनुसार जिन्दगी जिउन मन पराउँछन् । यि महिलाहरु जिन्दगीमा एउटा राम्रो स्थानमा पुग्दछन् । यसमा पनि आर्थिक स्थिति बलियो हुनुका कारण पैसालाई अनावश्यक रुपमा खर्च गर्न पछि पर्दैनन् ।
मकर राशि:ज्‍योतिषशास्त्रको अनुसार, यी राशि भएका महिलाहरु एकदमै धैर्य र मेहेनेती स्वभावका हुन्छन् । त्यसकारण यिनिहरुले खुब पैसा कमाउछन् । यदि पैसाको कुरा गर्ने हो भने यिनिहरुलाई कुनै राम्रो चिज किन्नु परेमा जति महंगोको सामाान भए पनि पैसा झिक्न डराउदैनन्।
कुम्भ राशि:यो राशि भएका महिलाहरुलाई हरेक चिजमा एकदम परफेक्ट चाहिन्छ ,यसमा चाहे त्यस चिजलाई किन्नका लागी जतिसुकै खर्च किन गर्न नपरोस् त्यस्ता चिज किनेर नै छोड्छन् ।
यो पनि : भुलेर पनि भगवान शिवलाई यस्ता कुराहरू चढाउनु हुँदैन (ॐ नम शिवाय):शिवजीले सबैभन्दा बढि मन पराउने वस्तुहरू भनेको गाँजा, भाङ्ग, धतुरो, बरफजस्तो चिसो गाईको दूध, श्रीखण्द र खरानी हुन्। त्यसैले यी कुराहरू चढाउँदा, शिवजी अत्यन्त खुसी हुन्छन्। तथापी शिवपुराणका अनुसार, भक्तालुहरूले शिवजीको पुजा आरधना गर्दा यी ५ वस्तुहरू कहिल्यै पनि चढाउनुहुँदैन, यदि चढाएमा अनर्थ हुनेछः १. गोलाईँती फूल (केताकी फूल) : एकदिन, विष्णु भगवान र ब्रह्मादेवको बीचमा ‘को बलियो’ भन्ने विषयमा घमासान युद्ध भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले एकदमै खतरनाक अस्त्र प्रयोग गर्न लागे, तब उनीहरूको बीचमा ज्योतिर्लिङ्ग बनेर शिवजी प्रस्थान गर्नुभयो।
त्यसपछि शिवजीले विष्णु र ब्रह्मालाई ज्योतिर्लिङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउन आदेश दिनुभयो। यो फूलको नाम ठाउँअनुसार फरक पर्ने हुन्छ। मध्यपश्चिमी क्षेत्रतिर यो फूललाई ‘गोलाईँती फूल’ भन्ने गरिन्छ भने तराई क्षेत्रमा यो फूललाई केताकी फूल भन्ने गरिन्छ। विष्णु देवले पनि शिवजीको आदेश मानी फेद खोज्न हिँडे, तर फेला पार्न सकेनन्। टुप्पो खोज्न हिँडेका ब्रह्मदेवले जुक्ती लगाए र गोलाईँती फूललाई आफुसँगै ढाँट्न आदेश दिए। दुवैजना फर्किए र विष्णुले हार स्वीकारे। तर ब्रह्माले ज्योतिर्लिङ्गको टुप्पो फेला पारेको भनी ढाँटे। गोलाईँती फूल पनि ब्रह्माकै कुरामा सहमत जनाउँदै शिवलाई ब्रह्माले टुप्पा फेला पारेको कुरामा हो हो मिलायो।
तर, ब्रह्माले ढाँटेको भनेर शिवजीले थाहा पाइहाल्नुभयो, किनभने उक्त ज्योतिर्लिङ्ग अनन्तसम्म फैलिएको थियो। ब्रह्मा र गोलाईँती फूलको त्यो झूटबाट क्रोधित शिवजीले ब्रह्माको एउटा टाउको काटिदिनुभयो र कसैले पनि उनलाई भगवान भनेर पुजा नगरून् भनेर ब्रह्मादेवलाई श्राप दिनुभयो। त्यसपछि, शिवजीले गोलाईँती फूलतर्फ फर्केर उनको पुजा गर्दा कहिल्यै पनि सो फूल प्रयोग गर्न नपाऊन् भनेर श्राप दिनुभयो।
२. तुलसी : शिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दैत्य जालन्धरको वध गर्न एकदमै कठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो। तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख! जालन्धर र महादेवको युद्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लुट्न गए। जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लुट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भष्म बनाइदिएका थिए। आफ्नो पतिको मृत्यु र आफूप्रतिको धोकाबाट क्रोधित तुलसीले महादेवलाई आफ्नो पवित्र पातले कहिल्यै पनि पुजा गर्न नपरोस् भनेर श्राप दिन्छिन्।
त्यसैले गर्दा नै शिवजीलाई तुलसीको पात चढाउनुहुँदैन भनेर शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ। ३. नरीवलको पानी : शिवजीलाई चढाउन नहुने पवित्र वस्तुहरूमध्ये नरीवलको पानी पनि एक हो। शिवजीलाई सिङ्गो नरीवल चढाउनु कुनै भूल हुँदैन, तर शिवलिङगमा कहिल्यै पनि नरीवल फुटाएर पानी नचढाउनुहोला। शिवपुराणमा, यस्तो गरेमा शिवजी रिसाउने र अनिष्ट हुने जनाएको छ। ४. बेसार : बेसारलाई स्त्रीहरूको सुन्दरता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै शिवजीलाई बेसार चढाउन नहुने शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
५. सिन्दूर : विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्। तर, शवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। यस्तो शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
Prevगाउँपालिकाका अध्यक्षले नै यि सुन्दरी उपाध्यक्षबिच आज विबाह गर्दै
Nextसुदूरपश्चिम धनगढीकी दुलही टिकटकमा भाइरल, को हुन् त यी हँसिली चेली ?
मंसिर ३ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस
आयो खुसिको खबर : सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य
प्याराग्लाइडिगंका पाइलटले उडिरहेकै समयमा युवतीलाई फुल टिपेर दिन खोज्दा राजुको मृत्यु
मेचीनगरमा भेटियो हरियाे परेवा, नेपालमा पहिलाे पटक भेटिएकाे दाबी
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3442)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (3232)
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ”! (2055)
अकस्मात सुनको मूल्य मा किन आयो यस्तो परिवर्तन ? (1935)
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1864)
हार्दिक बधाई !! नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्मपति ‘मेजर सृष्टी खड्का’ (1451)
प्रहरीको कुकुर गाउँ आउने भएपछि गोठालो गएका दिनेश (1443)
दोस्रो बिहे गर्दा बिरोध गर्नेलाई स्वेताको जवाफ (1312)
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! चोखो मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ ! (1064)
झापाको बिर्तामोडकी यी महिला जसले ठगिन् एक करोड ! (1054)
रवी लामीछानेले खोले अस्पताल, अब सबैको उपचार नि:शुल्क हुने
छोरीलाई दुध खु’वाउँदै गर्दा आमाको मृ’त्यु, आमाको ला’शले थि’चिँ’दा नि’सा’स्सि’एर छोरीको पनि मृ’त्यु
कोरोनाका बिरामीलाई अक्सिजन किन्न श्वेता र विजयन्द्रको सहयोग
सृजना वाग्ले जेल जाने पक्का,बाहिरियो यस्तो गोप्य भिडियो (हेर्नुस् पूरा भिडियो)
बिचरी आमा ! ७ वर्षको उमेरमा ३१ वर्षको केटासँग विहे भयो तर अहिले ८२ वर्षमा पनि कोही छैनन(भिडियो हेर्नुस्)